ब्वायफ्रेण्डसँग मासिक १ करोडभन्दा धेरै तलब लिने गर्लफ्रेण्ड ! – List Khabar
Home / मनोरंजन / ब्वायफ्रेण्डसँग मासिक १ करोडभन्दा धेरै तलब लिने गर्लफ्रेण्ड !
admin April 12, 2022 मनोरंजन Leaveacomment 435 Views
विबाह लगत्तै यी ह्याडसमसँग रोमान्स गर्दै गर्दा भेटीइन् सुन्दरी गायिका इन्दिरा जोशी
आठ वर्षपछि नेपाल फर्किएकी अरुणिमाको सुन्दरता उस्तै, प्रियंका समेत लोभिइन्
चर्चित फुटबलर क्रिस्टियानो रोनाल्डोलाई विश्वकै धनी खेलाडीमा गनिन्छ । खेलकुदबाहेक उनी आफ्नो व्यक्तिगत जीवनका कारण पनि चर्चामा रहन्छन् । यसपटक उनी फेरी गर्लफ्रेन्ड जर्जिना रोड्रिग्वेजको कारण चर्चामा छन् ।
एक रिपोर्टका अनुसार रोनाल्डोले आफ्नी प्रेमिकालाई खर्चका लागि हरेक महिना १ करोड ३२ लाख रुपैयाँ पारिश्रमिक दिन्छन् । एल नेसिओनलले रोनाल्डोले गर्लफ्रेन्डलाई दिने पैसालाई तलब भनेको छ ।
एल नेसिओनलका अनुसार जर्जिना रोड्रिग्वेजलाई ‘छोराछोरीको हेरचाह र अन्य खर्च’का लागि प्रति महिना १ लाख युरो रकम दिइन्छ। यसअघि रोनाल्डोले प्रेमिका जर्जिनालाई अढाइ करोडको कार उपहार दिएका थिए । रोनाल्डो र जर्जिना विलासी जीवनशैली बिताइरहेका छन् । जसको झलक जर्जिनाको सोसल मिडिया अकाउन्टमा देख्न सकिन्छ । जर्जिना र रोनाल्डो सन् २०१७ देखि सँगै छन् ।
जर्जिना पेशाले मोडल हुन् । उनी धेरै ठूला ब्रान्डको विज्ञापनमा पनि देखा परेकी छिन् । इन्स्टाग्राममा उनका ३६ करोडभन्दा बढी फलोअर्स छन् । उनको हरेक तस्विरमा लाखौंले लाइक र कमेन्ट गर्छन् । हालै जर्जिनामाथि बनेको डकुमेन्ट्री ‘आई एम जर्जिना’ मा उनको जीवनका सबै पक्षको चर्चा गरिएको थियो ।
‘द मिरर’को रिपोर्टका अनुसार एक समय पसलमा काम गर्ने जर्जिनाको जीवन रोनाल्डोसँग जोडिएपछि पूरै परिवर्तन भयो । जर्जिना ७५ करोडको आलिशान महलमा बस्छिन्, ९० करोडको याटमा यात्रा गर्छिन् साथै बुगाटी, रोल्स रोयस र फेरारी जस्ता लक्जरी कारहरूमा यात्रा गर्छिन्।
उनको महलमा स्विमिङ पुल, जिम र फुटबल ग्राउन्ड पनि छन् । रिपोर्टका अनुसार उनी हवाई यात्राका लागि निजी जेट प्रयोग गर्छिन् ।
Previous चैत्र २९ गते मंगलबार,आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
Next नयाँ वर्षको अवसरमा टेलिकमले ल्यायो नयाँ अफर, के–के छन् विशेषता ?
पुरुषले ६० वर्षमा बिहे गर्दा हुने महिलाले किन नहुने
पुरुषले ६० वर्षमा बिहे गर्दा हुने महिलाले किन नहुने ? यो भनाई हो नेपाली चलचित्रकी …